Yongeza iMithombo yeendaba kwiNdawo yakho ngokuLula ngeWimpy Player | Martech Zone
Yongeza iMithombo yeendaba kwiNdawo yakho ngokuLula ngeWimpy Player
NgeCawa, Agasti 5, 2007 NgeCawa, Agasti 5, 2007 Douglas Karr
Kwiminyaka embalwa edlulileyo, bendikhangela isidlali esihle seFlash MP3 ukuze unyana wam ongeze eyakhe umculo kwibhlog yakhe ngokulula. Abadlali beFlash balungile ukumilisela kuba banokuhambisa umculo endaweni yokwenza ukuba umsebenzisi awukhuphele ngaxeshanye. Emva kokuba ndigqogqile ndaza ndagqogqa, ekugqibeleni ndenzekile Umdlali weWimpy.
Kule mpelaveki, udliwanondlebe endilwenzileyo lwe-NPR ekusebenziseni izixhobo ze-Intanethi ukuphucula imbuyekezo yakho yathunyelwa online. Indawo yayintle kangangokuba ndandifuna ukuyithumela kwizixhobo zewebhu endazakhayo, I-Payraise Calculator.
I-Wimpy inabadlali abaninzi, iqhosha elilula, isidlali somsindo, kunye nomdlali wevidiyo. Mhlawumbi eyona nto intle kuzo zontathu ezi zinto kukuba ziyafikeleleka kwaye zinokuzitshintsha ngokupheleleyo. Mna Uyile umdlali kwisiza sonyana wam malunga nemizuzu engama-30.
Ndiyile i- umdlali kaJones Soda ababonakalise kwiwebhusayithi yabo kunyaka ophelileyo. Izolo, ndiyilele iqhosha lomdlali olula ukulungiselela I-Payraise Calculator malunga nemizuzu elishumi.
Isandi sisixhobo esimnandi kwiiwebhusayithi. Andikholelwa ukuba kufanele isetyenziswe gwenxa okanye iqale ngokuzenzekelayo (ndiyakucaphukela ukumangaliswa ngeaudiyo ekwi-intanethi!), Kodwa inokongeza okuninzi kwiwebhusayithi- ukubonelela ngobuntu njengefoto okanye ividiyo. Ngolwazi okanye isixhobo sewebhu, iklip yeaudio inokunika igunya nakwisiza ngokunjalo.